Maraykanka oo sheegay inay ballaarin doonaan Hawlgalladda ka dhanka ah Al-qaacida iyo Alshabaab.
Wargeyska New York Times ayaa shalay qoray in Hawlgalka Milliteriga Maraykanka ee uu Maamulka Obama ku kordhiyey Hawlgalkaasi inay tahay Tallaabo lagu xoojinayo Maamulka Madaxweynaha La-doortay ee Maraykanka, Donald Trump si ay u sii wadaan Dagaalka lagu jiro Kumanaanka Dagaalyahannadda Islaamiyiinta ee ku sugan Somalia, waa sida hadalka loo dhigay.
Kongareeska Maraykanka ayaa la filayaa inay bisha soo socoto si rasmi ahaan u shaaciyaan Dukumentiga horumarka laga gaaray Hawlgalka Maraykanka ka wadaan Caalamka, gaar ah Hawlgalka haatan ay kula jiraan Dagaalamayaasha Alshabaab, waa sida u uqoray Wargeyska New York Times.
Sannadkii 2013-kii Sharciga duqeynta ayaa xadidnaa, inkastoo ay Milliteriga Maraykanka sannooyinkii la soo dhaafay qaadeen Duqeymo ay ku sheegaan inay isku difaacayaan.
us-dronesQaar ka mid ah Khubarada ayaa mucaaradsan Maamulka in la isticmaalo qoraal ay Kongareeska Maraykanka ansixiyeen sannadkii 2001-dii, kaasi oo sababo wanaagsan looga dhiganayo Dagaalka ay Maraykanka kula jiraan Xarakadda Alshabaab.
Bishii March 5-dii ee sannadkan, Milliteriga Maraykanka waxay duqeyn ka fuliyeen gudaha Somalia, taasi oo ay sheegeen in lagu dilay in ka badan 150 Dagaalyahano ka tirsan Alshabaab.
Wargeyska New York Times ayaa qoray in weerarkaasi la qaaday iyadoo aan lala tashanin Siyaasad-sameeyayaasha Washingyon, waxayna Milliteriga Maraykanka sheegeen inay duqeyntaasi qeyb ka tahay waxa ay ugu yeereen Is-difaaca Shaqsiyadeed.
La-taliyayaasha iyo Milliteriga Maraykanka ee ku sugan gudaha Somalia ayaa la shegeay inay dalbadaan Duqeymaha Diyaaradaha marka ay dareemaan khataro ku soo fool leh.
Dhinaca kale, Wargeyska NYT waxay soo xigteen La-shaqeeye Sare oo lagu magacaabo Micah Zenko oo ka tirsan Golaha Xiriirka Arrimaha Dibedda Maraykanka, kaasi oo sheegay inay waali tahay in qeyb ka mid ah Sharciga soo baxay sannadkii 2001-dii in loo turjumanayo micno kale si Tagaeero dhinaca Cirka loogu fidiyo Ciiddanka Hawlgalka AMISOM.
Micah Zenko waxa uu ugu dambeyntii tilmaamay go’aanka ay Maamulka Madaxweyne Obama ku ballaarinayaan Hawlgalka ka dhanka ah Al-qaacida iyo Alshabaab inay tahay mid uu Obama doonayo inuu Maamulka cusub ee Donald Trump uga tago si loo ballaariyo Awoodaha iyo Maamulka ee Hawlgalkaasi.